Cayman Islands Zviri pamutemo Kuwedzeredza pane COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuvakazve » Cayman Islands Zviri pamutemo Kuwedzeredza pane COVID-19
Kuputsa Kufamba Nhau • Cayman Islands Nhau • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Cayman Islands Zviri pamutemo Dzokorora
NeMuvhuro, Chivabvu 11, 2020, yeCayman Islands Zviri pamutemo kugadzirisa pa Covid-19 yakaunzwa kumusangano wevatori venhau ichiti nyaya nhatu dzakanaka uye mazana manomwe negumi nenhanhatu dzakataurwa. Zvakare, maviri ekutyaira-kuburikidza zvivakwa zviri munzvimbo ari kuongorora 761 zuva nezuva. Pakati peHSA, CTMH Vanachiremba Chipatara uye Hutano Guta Cayman Islands iro zuva rekuyedzwa bvunzo ndi300.
Pamusoro pezvo, zvipatara zviviri zvemumunda zviri kushanda, kana zvikave zvakakodzera kuzvishandisa.
Munamato wezuva nezuva waitungamirirwa naMufundisi Kathy Ebanks.
Pa 764 bvunzo dzekuburitsa nhasi, 761 haina kunaka uye matatu akanaka. Pakati peizvi, kumwe kusangana kweanozivikanwa murwere akanaka uye ari asymptomatic; mamwe maviri ari chikamu chekuenderera mberi kwekuferefeta uye ese ari maviri asymptomatic.
Makumi matanhatu nemakumi matanhatu nematanhatu emayedzo akataurwa nezvayo nhasi akagadziriswa kubazi reHSA uye zana nemakumi mana nevana vaive kuchipatara cheDoctors. Aya ndiwo mubatanidzwa wemhedzisiro yekuongororwa kwezvikamu zvakasiyana zvehuwandu hwevanhu uye bvunzo dzekutevera dzinoitwa neHuzhinji Hutano.
Iwo manejimendi eKirk's Supermarket anga achinyatso kutaurirana neHuzhinji Hutano uye vanhu gumi nevaviri vakaedzwa kusvika parizvino; "Akadzika kwazvo" muzana yeaya akanaka uye panopera mangwana (Chipiri), chirongwa ndechekupedzisa kuyedzwa kwemunhu wese mushopu. Yese bvunzo yakaitwa neHSA. Kuchenesa kwakadzika kwakaitwa nesupamaketi, inotarisirwa neDhipatimendi reEnharaunda Hutano. HSA uye Doctors Hospital vacharamba vachiita kuongorora kwevamwe vashandi.
Pamakumi masere nemakumi masere nezvipo kusvika parizvino, makumi mashanu neshanu akapora, makumi matatu neshanu varwere vanoshingaira uye hapana varwere vakabvumidzwa.
Kiriniki ye'Flu neChishanu yakaona varwere gumi, vashanu neMugovera uye 10 neSvondo; iyo 'Flu Hotline yakagamuchira 5 mafoni neChishanu, 2 neMugovera uye gumi neSvondo.
Parizvino, pane vanhu makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe vari munzvimbo dzehurumende dzekuzviparadzanisa uye makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ehutano Hwevanhu kuferefeta vanhu.
Hwerengedzo ye4,187 vanhu vakaedzwa muCayman Islands kusvika ikozvino.
Vanhu vanga vachinotenga kuchitoro havafanirwe kunetseka kana vakatevera zvese zviga zvakatemwa: kuchengetedza kushamwaridzana, kupfeka kumeso uye kusabata kumeso kwavo; pamwe nekugeza maoko kwazvo pakudzoka kumba.
Maviri kutyaira-kuburikidza nezvivakwa zvekutarisa vakaona varwere mazana matatu pazuva. HSA iri kuenda zvakare kumakambani makuru uye kunoongorora ipapo, zvese zviri zviviri zvicharamba zvichienderera.
Padanho rino, hapana zano rekupusa kuyedza chitsuwa chose. Iko kutarisisa kuri kune vanhu vane kudyidzana kukuru neruzhinji sevashandi vemberi munzvimbo dzekuchengetedza hutano, supamaketi, gasi magasi uye mafesi. Zvakare kuyedzwa kweCayman Brac kuongororwa kuri kuitika.
Majeri haasati apedzwa kuongororwa; zvisinei, vazhinji vemajeri vakapedzwa pamwe nevamwe vasungwa; hapana akaedzwa aine chirwere panguva ino.
Pakati pezvivakwa, tarisiro ndeyekupedzisa mazana mana ezviedzo zuva nezuva.
Huwandu hwevashandi vemberi vanoedza kuongorora "yakanyanya, yakadzika kwazvo".
Vanhu vanosvika vanofanirwa kugara vari vega kwemazuva gumi nemana, mushure maizvozvo vanofanirwa kuyedza vasina kuti vasunungurwe munharaunda.
Kutsvaga kwekutevera kuri kuteverwa kunoenderana nemitemo yepasi rese uye kazhinji inovhara vanhu vese vari mumba, pamwe nevashandi pamwe chete mukati memamita imwe kana zvishoma padyo nemunhu akanaka kwemaminetsi gumi nemashanu kana kudarika. Saka kazhinji, vanhu gumi neshanu nevashanu vanovhenekwa sevanofonerwa kana munhu akaedzwa zvakanaka.
Mutungamiri, Hon. Alden McLaughlin Akati:
Mhedzisiro mukupera kwesvondo ine 761 zvisirizvo "zvakanyanya, zvinokurudzira" uye zvinosimbisa kushanda kwekuongorora uye nehurongwa huripo ikozvino kubata nehutachiona muCayman Islands.
Nekudaro, zvakare zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iwo matatu akanaka haana chiratidzo, zvichipa kutenda kune maonero ekuti panogona kuve nezvakawanda kunze uko munharaunda. Izvi zvinoratidza kuti kuvhurwa kwezviitiko zvemunharaunda kunofanirwa kuitwa zvine mutsindo uye kwete nekukurumidza. Zvinorambidzwa munzvimbo zviri kushanda. Kushivirira kunoshevedzwa.
Chikamu chinotevera kuvhurwa, asi zvishoma nezvishoma uye chakasimudzwa, indasitiri yekuvandudza neyekuvaka, iyo ichaburitsa vangangoita zviuru zvisere vashandi. Izvi zvichagadzirisa hupfumi uye kusimudzira basa muZvitsuwa mumavhiki anotevera.
Zano revanoongorora vashandi vekuvaka richaziviswa munguva pfupi iri kutevera. Semuenzaniso, zvivakwa zvehutsanana zvinofanirwa kunge zviri munzvimbo dzekuvaka kuitira kuti vashandi vakwanise kugeza maoko, kuwana nekudya chikafu zvine njodzi shoma kune vavanoshanda navo.
Maviri epamberi ekuongorora ekutyaira-kuburikidza nezvivakwa izvozvi munzvimbo zvatanga kushanda. Ona padivi repazasi kuti uwane ruzivo.
Zvakare, kutsigira kuvaka dzimba dzekuchengetera dzimba dzinozovhurwa muchikamu chinotevera futi, iri mune imwe vhiki, zvichibva pakuenderera kwekuongorora mhedzisiro paGrand Cayman. Kufamba uku kuchawedzera huwandu hwevatengi vanotenga mumba uye nekudaro njodzi yekutapurirana kwenharaunda. Mitemo yekuchinja muviri ichaitwa.
Kunyangwe paine kumanikidza kusingaperi uye kusingachinjike kwekuvhurazve Cayman Islands nehupfumi hwayo, "ethos" yeHurumende inoramba iri "hupenyu hwakakosha" uye nekudaro chinzvimbo chakanyatsosvika uye kuzvipira kwevanhu vedu hazvigone kukandwa nekuvhurwa kukuru. Zvidzidzo zvinogona kudzidziswa kubva kune dzimwe nzvimbo kuvhura nharaunda dzavo.
Kuenderera mberi kwekushivirira kwenharaunda kunokumbirwa sezvo chinangwa chiri kuvhurazve zvimwe "nekukurumidza" asi nenzira yakangwara.
Kuedzwa uye kuongororwa kuri munzira uye zano reHurumende pamusoro pehutachiwana hwehutachiona riri kushanda, kunyanya nehurongwa hwaro hwekuyedza uye kuwedzera mukuongororwa.
Cayman's per capita kuyedza iri pakati pevashanu vepamusoro pasirese.
Nezve kubuda kwendege, mashoma zvigaro muDominican Republic ndege yakarongerwa Svondo, 17 Chivabvu inowanikwa. Zvekuchengetedza, bata Cayman Airways yakananga pa949-2311 kana bhuku pawebhusaiti yeCAL.
UK iri kutora chinzvimbo chinotungamira mukugadzirwa kwejekiseni. “UK ndiyo imwe yenyika dzinopa rubatsiro rwakakura kumubatanidzwa wepasi rose wezvekudzivirira uye majekiseni ekudzivirira zvirwere, anozivikanwa saGavi. Musi wa4-5 Chikumi, UK ichange iine Musangano weGlobal Vaccine Summit, ichiunza nyika pamwe nemasangano kutevera hutungamiriri hweUK mukudyara basa raGavi. ”
Akapa mhere-mhere kubazi rezvemukati mekuongorora zvemabhizimusi nezvechinzvimbo chavo chekupindura COVID-19 nekuisa pekutanga nekushanda zvine mutsindo.
Gurukota rezvehutano, Hon. Dwayne Seymour Akati:
Minister vakapa mhere kuna Popeye naBurger King nekupa chikafu kuHSA paGrand Cayman uye kuStar Island yekupa chikafu kuvashandi veChipatara Chekutenda kuCayman Brac.
Iyo 60-mibhedha yemumunda chipatara nzvimbo yakagadzirirwa uye yakagadzirira kushandiswa, kana paine paine kudikanwa kwayo. Kuti uwane ruzivo, tarisa padivi repazasi.
Nekudzoreredzwa kwemitemo yekudzika nguva mu Little Cayman naCayman Brac svondo rapfuura iyi mitemo yakatarwa yekusvika pamba yasara iripo kusvika 15 Chivabvu 2020 na5 mangwanani.
Soft curfew kana Shelter muPaundi Mitemo paGrand Cayman inoramba ichishanda pakati pemaawa e5am na8pm zuva nezuva Muvhuro kusvika Mugovera.
Yakaomarara Nguva yekudzora kana kuzara kwakakiyiwa, kunze kwevasiyiwa vanokosha mabasa evashandi anoramba achishanda paCayman Brac pakati pemaawa a8pm na5am husiku hweMuvhuro kusvika Svondo kusanganisira. PaGrand Cayman, kwakaoma kusvika pamba pakati pemaawa a8pm na5am husiku hweMuvhuro kusvika Svondo uchibatanidzwa uye maawa makumi maviri nemaviri ekudzika kwakaoma neSvondo - kubva pakati pehusiku Mugovera kusvika pakati pehusiku Svondo.
Nguva dzekurovedza muviri dzisingapfuure maminetsi makumi mapfumbamwe dzinobvumidzwa pakati pemaawa e90 mangwanani na5.15pm zuva nezuva Muvhuro kusvika Mugovera. Hapana nguva yekurovedza muviri inobvumidzwa nemusi weSvondo panguva yekutora nguva. Izvi zvinoenderana naGrand Cayman chete sezvo zvirambidzo izvi zvakabviswa muCayman Brac ne Little Cayman.
Yakazara-maawa makumi maviri nemasere zvakaoma nguva yekufamba sezvo zvine chekuita neBlack Kuwana kune Ruzhinji Mahombekombe paGrand Cayman inoramba iri munzvimbo kusvika Chishanu, 24 Chivabvu na15am. Izvi zvinoreva kuti hapana mukana wekuwana mahombekombe eruzhinji paGC chero nguva kusvika Chishanu 5 Chivabvu na15 mangwanani. Izvi zvinorambidza chero munhu kupinda, kufamba, kushambira, kubata nyoka, kubata hove, kana kuita chero mhando yemhando yegungwa pane chero ruzhinji rwegungwa paGrand Cayman. Ichi chibvumirano chinobviswa kubva kuCayman Brac kutanga China, 5 Chivabvu manheru.
Sidebar: Premier Inotsanangura HSA Kuwedzera kwe COVID Kuongorora kugona
Veruzhinji Hutano huri kuronga kugadzwa nevashandi vemberi kune ramangwana rinotaridzika apo kuedza kwekuyedza kwawedzera. Chikamu chechipiri vashandi vemberi uye chikamu chevashandi vekuvaka parizvino vari kurongerwa kuongororwa. HSA, Veruzhinji Hutano, uye Chief Medical Officer vari kushanda pamwe kuti vaise pamberi vanhu kana bhizinesi vanoonekwa sevanokosha pamberi pevashandi.
“Kune zviuru zvevanhu zvinoonekwa sevashandi vemberi, saka zvinotora mavhiki mashoma kuti vapfuure nevazhinji. "Tinonzwisisa kuti pane kushushikana muhuwandu hwevanhu kuti uongororwe saka tiri kuedza zvese kuongorora vanhu vakawanda vanokodzera," vakadaro Dr Samuel Williams-Rodriguez, Medical Officer wehutano. "Pamusoro pekutyaira kuburikidza nekuvheneka, nhengo kubva kuPublic Health dziri kuongororawo nzvimbo panzvimbo dzemabhizimusi mahombe, izvo zvinoita kuti vashandi vabhadharwe vasina kusiya basa."
Rutivi rwechipiri 2: Gurukota Seymour Vanosimbisa Hupenyu Hwemhuri Imwe Nharaunda Yezvekurapa
“Tinogona kubvuma kuti chirwere cheCOVID-19 chave chiitiko chekudzidza kwatiri tese, kunyanya avo vakakomborerwa kushanda mukati mehurumende. Isu tinofanirwa kudzidza kuchinjika nekukasira sezvo ruzivo rwuchikura apo tichigadzira zvirongwa zvakakodzera zvekuitika kwenyika yedu. Pakati pezvirongwa izvi chipatara chemumunda chingawana chero kufashukira kwevarwere veCOVID-19 kana zvivakwa zvedu zvehutano zvikasvika pakukwanisa.
NeChishanu, nhengo dzeNational Emergency Operations Committee kana NEOC, vatungamiriri vanobva kuHSA nevamwe varapi vakatenderera kuFamily Life Alternate Medical Center. Iyi nzvimbo yemubhedha makumi matanhatu yakave yakashongedzerwa zvakakwana kuti igare varwere mune chiitiko chekumukazve mune COVID-19 kesi. Kunyangwe isu tichivimba nemoyo wese uye tichinamata kuti hatizove nevanhu vazhinji vanoda kurapwa, kugadzirira mamiriro akadaro kwakakosha kuponesa hupenyu.
Chipatara chemumunda chakaonekwa sechikamu chechina muyero muCayman Islands Clinical Guidance yeCOVID-4 Management. Zvivakwa zvinoverengeka zvakaongororwa, uye iyo Hupenyu hweMhuri yakaratidza kuva mhinduro yakanakisa zvichibva pahukuru, kufefetera kwakaringana kwemweya, uye padyo neCayman Islands Hospital. Kana zvichidikanwa, nzvimbo iyi ingangoda vashandi vanosvika zana nemakumi maviri, vese vari vekiriniki uye vasiri vezvechipatara, kuti vashande zvizere Iyo Hupenyu Hwemhuri Humwe Medical Medical ichave inotungamirwa naDr. Dr. Elizabeth McLaughlin, HSA Musoro Wenjodzi uye Emergency; uye Gillian Barlow, HSA Mukoti maneja.
Iyo Hupenyu Hwemhuri Imwe Alternative Medical Center yakagoneswa kuburikidza neruzhinji uye akazvimirira chikamu chekudyidzana. Kuzivikanwa kwakakosha kunoenda kuna Mr. Simon Griffiths weDhipatimendi rePublic Works avo vakatungamira chirongwa ichi uye vakashanda padhuze neHSA Clinical Task Force, NEOC, kunyanya Graeme Jackson NEOC maneja weprojekiti, uye nevanozvimiririra vezvehutano kuti vaone kuti zvese zvinodiwa pakurapa zvichazadzikiswa. .
Tinodawo kupa kutenda Mufundisi Alson Ebanks pamwe neungano yavo nekuvapa Family Life Center. ”
Izvo zvakataurwa nezuro muCayman Islands Zvemutemo Kuvandudza.